Semalt: Ziziphi iifayile-kwi-Website kunye neDarodar Bots kwaye Ungabakhusela njani?
Xa usebenzisa i-Google Analytics ingxelo yezothutho, enye yezinto ekufuneka uyiqaphele ngumthombo wendlela ebonakalayo. Ngamanye amaxesha, eminye imithombo ingavelisa inani elikhulu lezithuthi kunabanye. Ngokujonga ngokukhawuleza, umntu unokuphawula ukuba inani lokudluliswa kwezi zimbini: i-darodar.com, kunye namaqhosha-for-website.com - strawberry juul pods. Ngaphandle kwabo kubonakala kwiingxelo ze-GA, kukho ithuba lokuba awuzange ulive ngalezi ziza ngaphambili, kwaye unomdla wokukwazi ukuba kutheni bangenisa i-traffic kangaka.
Ukushwankathela oku, iifom zimbini zisebenzisa iqhinga eliyaziwa njenge-spam yokuthumela. UMax Bell, ingcali ehamba phambili Semalt , uchaza ukuba imbono emva kokudluliselwa kogaxekile kukuba ii-sites zifumana ukuvelisa amaninzi amaninzi kwisiza esisodwa kwiziko abathile abafisa ukukhuthaza. Xa iinjongo zokukhangela zikhawulela iigodo, zifumana ezi zihanjiswe kwaye zibandakanye kwiingxelo zokugqibela. Ingcipheko kule nto kukuba akukho mgwaqo osebenzayo kwaye ungatshintshi indlela eyenza ngayo izigqibo kwiwebhusayithi.
Ekubeni zonke izalathisi zibuyela kwindawo ethile, umnini unakho ukwazi ukuba kutheni isayithi ibhekiselele kakhulu kwiitrato. Xa beqakraza kwi-URL kwimibiko ye-GA, ibuyele kwakhona kwiwebhusayithi yokudlulisa, eguqulela ngokutsha njengotyelelo olutsha. Kwi-spamming site, i-hits ithola kumanini angabonakaliyo ayimvelo.
Ngenhlanhla, akukho nengozi yangempela kwi-website. Njengoko kushiwo ngaphambili, iyakwenza yonke into idityaniswe ngedatha malunga nesayithi ukususela ekugqibeleni ngenani. Isiphumo sibizo esicatshulwayo esingafaneli umfanekiso wezinto ezenzekayo kunye nesiza. Ngokuqhelekileyo, ixabiso lokuhlawula i-100% kunye nexesha lokungena kwi-site.
Kuya kubakho ukukhusela amaqhosha-kwi-website kunye ne-darodar ukuze ufumane umfanekiso ogqithiseleyo wokusebenza kwesiza. Uninzi lwamanqaku ahlobene nokucoca inkcazo ichaza ukusetyenziswa kohlobo olutsha oluthile lwe "Bot Filtering" kwiGoogle Analytics. Ngaphantsi kwezicwangciso zokujonga, i-Google yongeze ibhokisi yokuhlola elula apho umsebenzisi angakhetha ukujonga okanye ukushiya angakhange ahlolwe. Ukususela kumava kunye nalolu khetho, isiphelo sale nqaku sicinga ukuba inketho yokucoca inkcazo ayifaki ukuhlutha abadlali abaxhamli be-double barrator: i-darodar..com, kunye namaqhosha-for-website.com.
Indlela efanelekileyo yokuvimba amabhinqa-kwi-website kunye ne-darodar ekukhutsheni i-junk traffic ukusetyenziswa kwefayile. Sebenzisa le nkqubo ilandelayo:
1. Vula i-Google Analytics kwaye nqakraza kwiphepha le-Admin.
2. Inketho yokujonga ebonakalayo kwikholam efanelekileyo kufuneka ibonise i-submenu apho kukho ukukhawuleza ukuba "Yakha iNew View." Iingcali zicebisa malunga nokudala isihlunu senkcubeko phantsi kombono ukwenzela ukuba ekugqibeleni kwenkqubo, kukho enye imbonakalo engabonakaliyo enayo yonke into ebhaliweyo yokuqhathanisa.
3. Nika icebo igama.
4. Kwi-Filters ithebhu, khetha ukhetho olutsha lwe-Filter.
5. Sebenzisa igama elikhethiweyo kwisihlungi esitsha.
6. Uhlobo lwefayili kufuneka lube ngumntu.
7. Sebenzisa ukuhanjiswa kwintsimi yokuhlunga ngaphantsi kwe-Exclude kwaye ufake igama lomsebenzisi wokuqala (amaqhosha-kwi-website).
9. Phinda kwakhona ukusuka kwinqanaba lesi-5 kwi-darodar.com.